Oganda mifehy ny varotra bibidia amin'ny alàlan'ny elektronika, mitahiry fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Oganda mifehy ny varotra bibidia amin'ny alàlan'ny elektronika, mitahiry fizahantany
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Oganda • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Oganda mifehy ny varotra bibidia
Ny minisiteran'ny fizahantany, bibidia ary fahagola ao Oganda dia nanangana ny rafitra fahazoan-dàlana elektronika voalohany hifehy ny varotra amin'ny bibidia ary koa ny vokatra azo amin'ny fiainana an-tany ny 29 jolay 2021 androany.
Eo ambanin'ny lohahevitra "Fanamafisana ny lalàna mifehy ny varotra fiainana dia," ny rafitra mamela elektronika dia mikendry ny hifehy ny varotra ara-dalàna amin'ny bibidia sy hisorohana ny varotra karazana tsy ara-dalàna.
Izany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana elektronika sy fahazoan-dàlana ho an'ny varotra (fanafarana, fanondranana ary fanondranana indray) amin'ny santionany.
Ireo santionany ireo dia voatanisa ao amin'ny Convention on International Trade in Endangered Spies of Wild Fauna and Flora (CITES).
Oganda izao no firenena voalohany tany Afrika Atsinanana ary faha-8 ao amin'ny kaontinanta afrikanina namolavola rafitra permis CITES elektronika.
Ny fampandrosoana ny rafitra fahazoan-dàlana elektronika dia novatsian'ny Amerikanina vola ao amin'ny United States Agency for International Development (USAID) / Uganda Combating Wildlife Crime (CWC) amin'ny alàlan'ny Wildlife Conservation Society (WCS) miaraka amin'ny Ministeran'ny fizahantany, Bibidia sy fahagola.
Ny fandefasana dia notarihan'ny Dr. Barirega Akankwasah, PhD, Komisiona ny fiarovana ny biby sy ny talen'ny talen'ny Ministeran'ny fizahan-tany sy ny zava-mahadomelina (MTWA), amina endrika an-tserasera sy ara-batana. Nanatrika ny fanatrehana ny minisitry ny bibidia sy ny fahagola, ny manan-kaja Tom Butime, izay nitarika ny fanombohana; ny sekreterany maharitra, Doreen Katusiime; Masoivohon'i Etazonia any Oganda, Ambasadaoro Natalie E. Brown; ary Lehiben'ny Delegasiona Eraopeana any Oganda, Ambasadaoro Attilio Pacifici. Haruko Okusu, Lehiben'ny Tetikasa, dia afaka nisolo tena ny Sekretariatin'ny CITES.
Raha niresaka tamin'ity hetsika ity ny masoivoho Brown dia nanasongadina ireo tetik'asa izay tohanan'ny USAID hiadiana amin'ny varotra bibidia tsy ara-dalàna, ao anatin'izany ny Canine Unit ao amin'ny Karuma Wildlife Reserve, toerana anazarana alika sy fitaovana hifehezana ireo vokatra biby any amin'ny faritra.
Ny masoivoho Pacifici dia nitaky ny fanimbana ny ala, ao anatin'izany i Bugoma, ho an'ny siramamy ara-barotra nambaran'ny Hoima Sugar Limited sy ny Zoka Forest, ho an'ireo mpitrandraka ala izay notsidihin'ny delegasiona UE tamin'ny volana novambra 2020 ary nandrakitra an'io fandringanana io tamin'ny alàlan'ny sary zanabolana. Bugoma Forest dia toeram-ponenan'i Uganda Mangabey endemika, ary ny Ala Zoka dia toeram-ponenana endemika an'ny Flying Squirrel. Ireo ala roa ireo dia teo afovoan'ny fampielezan-kevitra naharitra hamelezana ireo cartel an'ny mpangalatra tany sy ireo singa maloto ao amin'ny birao avo.
Haruko Okusu, CITES Secretariat, dia nanamarika fa “… Ny fahazoan-dàlana dia iray amin'ireo fitaovana lehibe hanaraha-maso ny varotra amin'ireo karazana voatanisa ao amin'ny CITES ary manakiana ny lanjan'ny varotra CITES. Ny rafitra Oganda dia mikasa ny hiantoka ny dingana tsirairay amin'ny gadra fitehirizana. ”
Dr. Barirega dia nanome fanazavana momba ny fanaovan-tsonia CITES sy Oganda taty aoriana, ao anatin'izany ny fandikana ny Appendices I, II, ary III amin'ny lisitra Convention izay manana ambaratonga samihafa na karazana fiarovana amin'ny fanararaotana tafahoatra.
Nambarany fa, amin'ny maha tompon'andraikitra ny CITES Management, ny minisiteran'ny fizahantany, wildlife ary ny antiquities any Oganda dia omena alalana hiantoka ny varotra amin'ny karazana CITES voatanisa sy ireo karazam-biby hafa dia maharitra sy ara-dalàna. Izany dia natao tamin'ny fomba hafa tamin'ny alàlan'ny famoahana fahazoan-dàlana CITES araka ny tolo-kevitry ny Fahefana Bibidia Uganda momba ny biby dia; ny minisiteran'ny Fambolena, ny indostrian'ny biby ary ny jono ho an'ny trondro haingo; ary ny minisiteran'ny Rano sy ny tontolo iainana ho an'ny zavamaniry manana fiaviana. Andraikitry ny manam-pahaizana siantifika CITES ny miantoka fa ny varotra, indrindra ny karazam-biby na zavamaniry, dia tsy manimba ny fahaveloman'izy ireo ilay karazana any an'ala.
Hatramin'izao, Oganda toy ny firenena maro hafa dia nampiasa rafitra fananganana taratasy fanamarinana sy fahazoan-dàlana miorina amin'ny taratasy, izay azo zahana amin'ny fisandohana, mila fotoana bebe kokoa amin'ny fikarakarana sy ny fanamarinana, ary amin'ny fahatongavan'ny COVID-19, ny fivezivezena antontan-taratasy dia mety mety hampidi-doza amin'ny famindrana aretina. Miaraka amin'ny rafitra elektronika, ny teboka mifantoka CITES isan-karazany sy ny maso ivoho mpampihatra lalàna dia afaka manamarina avy hatrany ny fahazoan-dàlana ary mizara fampahalalana tena izy momba ny varotra dia. Izany dia hisorohana ny varotra bibidia tsy ara-dalàna izay mandrahona ny mponina amin'ny karazam-biby marolafy malaza indrindra toy ny elefanta, amin'izay manimba ny vola miditra amin'ny fizahan-tany any Oganda ary ny filaminam-pirenena.
Joward Baluku, tompon'andraikitra amin'ny fiainana an-tany ao amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany, bibidia ary fahagola, dia nampiseho ny rafitra an-tserasera mampiseho ny fomba tsy maintsy anaovan'ny olona tsotra fotsiny midira ny fahazoan-dàlan'izy ireo amin'ny alàlan'ny rohy ao amin'ny tranokalan'ny Minisiteran'ny Fizahantany Wildlife and Antiquities izay mitondra ny mpangataka amin'ny alàlan'ny fizotry ny fisoratana anarana alohan'ny hamaritana azy ireo sy hanamarinana azy.
Ny masoivoho amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID) / Uganda Combating Wildlife Crime (CWC) dia hetsika 5 taona (13 Mey 2020 - 12 Mey 2025) napetraky ny Wildlife Conservation Society (WCS) miaraka amina mpiara-miombon'antoka mpiara-miasa. anisan'izany ny African Wildlife Foundation (AWF), Network Resource Conservation Network (NRCN), ary The Royal United Services Institute (RUSI). Ny tanjon'ity hetsika ity dia ny hampihenana ny asan'olom-biby any Oganda amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahafahan'ny mpiasan'ny CWC mamantatra, manakana ary manenjika ny heloka bevava amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo masoivoho fiarovana sy mpampihatra lalàna, mpiara-miombon'antoka mpampihatra USAID, orinasa tsy miankina ary vondron'olona monina mifanila aminy. mankany amin'ny faritra arovana.
Ny fifanarahana momba ny varotra iraisam-pirenena momba ny karazan-java-maniry tandindomin-doza any Wild Fauna sy Flora (CITES) dia vita sonia ny 3 martsa 1973, ary nanomboka ny 1 jolay 1975 . Oganda, antokon'ny fivoriambe nanomboka ny 16 Oktobra 1991, dia nanendry ny Minisiteran'ny Fizahantany, Bibidia ary ny Antiquities ho CITES Management Authority hitantana ny rafitra fahazoan-dàlana ary handrindra ny fampiharana ny CITES any Oganda. Oganda koa dia nanendry ny Fahefana Bibidia Uganda; Ministeran'ny rano sy tontolo iainana; ary ny minisiteran'ny Fambolena, ny indostrian'ny biby ary ny jono ho CITES Manampahefana siantifika ho an'ny bibidia, zavamaniry ary trondro haingo samy hafa mba hanomezana torohevitra siantifika momba ny vokatry ny varotra amin'ny fiarovana ny karazana any an'ala.